Ngaba indawo yakho yeOrganic ibalulekile? | Martech Zone
Ngaba indawo yakho yeOrganic ibalulekile?
NgoLwesithathu, uDisemba 28, 2011 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Ixesha lokuba ndenze ruffle ezinye seo Iintsiba kwakhona! Namhlanje ndithathe isigqibo sokukhuphela izibalo zam kwiGoogle Search Console kwaye ndenza inyani ngokugcwala kwitrafikhi endiyifumanayo kuphando lwezinto eziphilayo. Martech Zone Amanqanaba aphezulu aphezulu ngokuqaqambela kwinani lamagama aphambili anezikhundla ezili- # 1 kukhuphiswano oluphezulu, amagama aphambili asezantsi. Sonke siyazi ukuba phezulu kwinqanaba, liphezulu izinga lokucofa kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela. Kodwa ngaba oko kubalulekile kumfanekiso omkhulu?
Sukukuphungula ukugcwala kwakho kokukhangela okuphilayo okuvela kumagama aphambili ongawabekiyo okanye anezinto eziphantsi zokukhangela. Kwifayile yethu ibhlog yentengiso, Iipesenti ezingama-72 zezithuthi zethu eziphilayo zivela kwizinto ezingenisiweyo nditsho nakwiphepha 1! Into ebangela umdla nangakumbi kukuba sifumana ukugcwala kwabantu abaninzi kwinqanaba le-8 kunokuba kunjalo kwinqanaba le-1!
Ndiyakuqonda oku kuvakala kunyelisa, kodwa kuya kufuneka ucinge ngale nto njengoko ujonge isicwangciso sentengiso. Ngaba kubaluleke ngakumbi ukutyala imali ekumgangatho ophezulu, amagama aphambili okhuphiswano? Oku kunokuba ngexesha elifanelekileyo kwaye kubize. Okanye, ngaba unokutyala ixesha kumzamo wokubonelela ngemixholo eyahlukeneyo kumagama aphambili anomsila ongakhuphisanayo kodwa afanelekileyo kumbutho wakho?
Ukunyaniseka, sikhethe le yokugqibela. Bendihlala ndicinga ukuba inqanaba # 1 lalibalulekile kwimpumelelo yethu. Kodwa ukusukela oko ndafumanisa ukuba ukubeka amandla ngakumbi kumxholo omkhulu bekusifumana ingqalelo ngakumbi. Izibalo azixoki… ngelixa izinga lokucofa kwiphepha lesiphumo se-injini yokukhangela linokunyuka kakhulu njengoko ufika kwindawo # 1, ukugcwala kwabantu ngokusekwe kwinqanaba akukhathaleli kangako. Siyazi ukuba singangena kwiziphumo ezilungileyo ngomxholo omkhulu… kutheni ungasebenzi ngokulula kwaye wandise ukugcwala kwezinto eziphilayo kunye nomxholo ofanelekileyo, osemgangathweni endaweni yokudubula i-bullseye ngalo lonke ixesha?
Yenza uvavanyo lwakho lwenqanaba lakho lendalo. Luphi uninzi lwakho zendlela ivela? Nokuba ungcono umbuzo, luphi uninzi lwakho ishishini ivela? Uqikelelo lwam kukuba luvela kwimisila emide eyahlukeneyo, uphando olufanelekileyo. Ndibonise ndiphosakele! 🙂
Andikugxothi ngokupheleleyo ukubekwa kwinqanaba eliphezulu kukhuphiswano oluninzi. Lubonakaliso olukhulu lwegunya kwaye unokuqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi. Kananjalo, ukubekwa kwindawo ephezulu kwamanye amagama aphambili kubonakala kunxibelelana nokubekwa kwinqanaba eliphezulu kumagama amaninzi ahambelana noko. Umdibaniso unokuqhuba itoni yezithuthi. Ndithetha nje ngendlela elungeleleneyo. Endaweni yokuzama ukufumana i-homerun ngayo yonke into ekuthiwa yi-bat-bat, kulungile qho emva kwexesha ukuzama nje ukufumana isiseko!
Uhlaziyo: Emva kokwabelana ngale posi, ndafumanisa ukuba ayindim ndedwa oye wakuqaphela oku Chase iTrafikhi, hayi iZikhundla.
tags: ctrInqanaba likagoogleGoogle +Isikhundla segama elingundoqoixesha elideamagama angundoqo we-longtailpagerankudidiinyoka
Ukuzibandakanya kweVidiyo ngesiXhobo
Dec 28, 2011 ngo-4:59 PM
Esi yayisisithuba esihle ngokwenene uDoug. Amadoda ayaxoka, Abafazi bayaxoka, Amanani awaxoki. Ke ngokusuka kumanani akho, ndingatsho ukuba ukho - kwaye okona kubaluleke kakhulu, iinkampani ezingajonganga abathengi kufuneka zithathele ingqalelo le ndlela. Ndiza eofisini kwiintsuku ezimbalwa kwiveki ezayo kwaye ndisebenza - ndingathanda ukumba nzulu kule nto. (PS: Ndineeveki ezi-2 zokufunda kwi-teamtreehouse.com. Abanye abantu bagqiba ekubeni bafunde ukubhala ikhowudi yakhe. Yazisa uMnu. Coley! Uya kufumana ukukhaba kuyo! HA
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-8: 03 AM
Igunya kunye nefuthe kumagama angundoqo anxulumeneyo kubaluleke kakhulu. Khumbula ukuba i-Google Webmaster Tools ibonisa kuphela inxalenye yokubeka (i-1,000 amagama angundoqo).
Dec 29, 2011 ngo-7:39 PM
Ngaba lo mxholo une-adwords edibene nayo? Ngamanye amagama ngaba wawufumana itrafikhi ehlawulwayo kwii-adwords kwaye uluhlu lwezinto eziphilayo lwalubonakala. Ndicinga ukuba i-adwords iqhuba ngcono xa luhlu lwazo oluhambelanayo lubonakala. Ukunikezelwa kwabantu abakhethiweyo baya kucofa i-premium yongeza (xa enye ibonakala) oku kubangela ukuba i-adwords ibe ngumthombo we-traffic kwaye amanani aya kupeyinta i-organic njengento ekhangeleka ingabalulekanga kodwa inyaniso i-CTR yayiza kuba ngaphantsi ngaphandle kwezo ndawo zokubekwa kwezinto eziphilayo.
Iposi enkulu ekhuthazayo.
Dec 29, 2011 ngo-7:49 PM
@ktatgenhorst:disqus Hayi, asenzi naluphi na uphando oluhlawulelwayo ukufumana itrafikhi.
Dec 30, 2011 ngo-2:52 PM
Doug, ingcebiso yakho yokugqibela, sukela itrafikhi, hayi amanqanaba yeyona nto abantu abaninzi abayifumaniyo. Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba kungenxa yokuba i-rankings ilula, i-traffic inzima kunye nokuguqulwa, nokuba kukucofa i-ad, ukukhokela okanye ukuthengisa kunzima nakakhulu.
Mar 12, 2012 ngo 2:31 PM
Molo Doug, ndiyithandile le post kodwa ndinezimvo malunga nenkcazo yakho ye-SERP yamanqanaba eli nqaku. Ukuba isikhundla sakho kukuba i-SERP ye-Google yokwenza i-personal yenze inkcazo eqhelekileyo ye-Google "inqanaba" lingabalulekanga, yeyiphi inkcazo yokubeka oyisebenzisayo kwesi sifundo? Ngamanye amazwi, wenza ibango lokuba i-72% ye-traffic yakho ivela kumagama angundoqo ongawabekiyo kwiphepha le-1 le-Google SERPs, kodwa ukuba wonke umntu owenziwe ngumntu, ngubani uGoogle SERPs othetha ngayo? *Umntu* ufumana ibhlog yakho kula magama angundoqo, akunjalo? Kwaye amathuba okuba bakhangela kwiPhepha le-2,3,4 njl kwi-Google SERPs aphantsi. Ke kubo, Ukwindawo kwiphepha loku-1, kungenjalo ngekhe bakufumane kumanani amakhulu othetha ngawo.
Mar 12, 2012 ngo 2:36 PM
Enyanisweni, akunjalo Tod. Njengoko inqaku libonisa, uninzi lwetrafikhi yokukhangela endiyifumanayo AYIKHO ekubekweni kwam kwiphepha lokuqala. Inqaku lam asikuko ukuba umgangatho AKUKHO nto ibalulekileyo…. Inqaku lam lelokuba UKUBALULEKILEYO kubaluleke ngakumbi KUNOKWEHLELO. Ukuba ugxininisa umxholo wakho kwaye ubhale umxholo omkhulu, abantu baya kukufumana. Nokuba yeyiphi na inqanaba.
Sikwabona oku kunye nabathengi bethu. Umthamo ophezulu, amagama angundoqo aphezulu aqhuba i-traffic ethile kodwa kungekhona ukuguqulwa. Uguqulo luvela kumaphepha abaluleke kakhulu kunye nezithuba ezivela kumagama angundoqo anomsila omde ukusuka kwi-SERP yokubekwa ngaphandle kwephepha lokuqala. Kwakhona, ukufaneleka kwisikhundla.
Mar 12, 2012 ngo 3:06 PM
Doug, inqaku lakho lalicace gca ukuba i-72% yetrafikhi yakho ayiveli kwimibuzo apho ubeka khona kwiPhepha le-1 le-SERPs. Umbuzo wam ujikeleze ingcamango "yenqanaba" kwiminyaka yobudala be-SERP yokwenza umntu. I-72% yetrafikhi yokukhangela kwakho ikufumene…ngandlela thile. Bakufumana njani ukuba awufakwanga kwiPhepha 1 kuloo mibuzo? Ngaba i-SERP ye-personalization ifikile ngoku kangangokuba iPhepha loku-1 lomntu wonke lahluke kakhulu?
Mar 12, 2012 ngo 3:16 PM
Ukuyokutsho... Abanye babaxumi bethu babona isiqingatha sotyelelo olusuka kukhangelo olulolwakho. Kodwa olu ayilophendlo lobuqu... Le datha ivele kwiWebmasters. Ngabantu abacofa ixesha elidlulileyo kwiphepha 1 befuna isiphumo ESIFANELEKILEYO.
Mar 12, 2012 ngo 10:40 PM
Ndandisoloko ndicinga ukuba xa abantu bengayifumani into abayifunayo kwiPhepha loku-1, bavele babuze umbuzo ngendlela eyahlukileyo, kunokuba baye kwiPhepha lesi-2. Yiloo nto endandisoloko ndiyiva kwaye Inyani yile nto ndihlala ndiyenza. Ukuba le nto uyithethayo iyinyani, indlela abantu abacinga ngayo itshintsha kakhulu.
Mar 14, 2012 ngo-12: 14 AM
Tod – ngokuqinisekileyo yindlela endikhangela ngayo. Kodwa ayiyeki ukundimangalisa indlela abanye abantu abakhangela ngayo. Umzekelo: Abantu abaninzi, abaninzi, abantu abaninzi bachwetheza izivakalisi ezipheleleyo kwiinjini zokukhangela kunokuba babhale amagama angundoqo ambalwa. Sisebenze nabaxumi bethu ekuphuhliseni ii-FAQ ezithatha itoni yokhangelo. Ngubani owayesazi?!
Mar 12, 2012 ngo 5:16 PM
Doug, ndilithanda kakhulu eli nqaku. I-mantra yam ibisoloko ingabathengi bokuqala umxholo okwesibini. Ukuba umxholo wakho unomtsalane kubathengi bakho baya kuhlala bekufumana.
Mar 14, 2012 ngo-12: 46 AM
Uninzi lwetrafikhi yam luvela kwizithuba zentsika endizibhale kwiminyaka eyadlulayo. Umsila omde undibonelela ngomjelo oqhelekileyo wetrafikhi usuku nosuku. Igama elithi "intsika yentsika" liye lasetyenziswa kakubi ngokuhamba kwexesha. Xa ndisithi "iposti yentsika" ndithetha ukubhala umxholo ochanekileyo ofanelekileyo kwi-site niche yam kwaye ugcwalisa imfuno yokwenyani kuluntu. Hayi nje ukucutha umxholo njengoko abanye benza. Ukuba ngowokuqala ukuzalisa eso sidingo kuseke umxholo wam noGoogebot njengegunya kwisihloko.
Mar 14, 2012 ngo-1: 58 AM
Enkosi @blogbloke:disqus ! Kuhlala kumnandi ukufumana izincomo komnye woovulindlela. 🙂